Ihe iko, akwa iko, akwa obere - Co-Lee
ANY ARE nọ na ụlọ ọrụ, yabụ na ị gaghị anọ
Wuxi CO-Lee Mbukota bụ otu n'ime ndị na-eduga iko, iko iko na ngwa ngwa na ngwa anya ụlọ ọrụ. Na ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe, Co-Lee na-enye ọrụ pụrụ iche, ngwaahịa dị elu na asọmpi asọmpi ma na-enyekwa ikike imepụta iji mepụta ikpe ahaziri iche na ngwa. N'iji teknụzụ kachasị elu, anyị na-eme njikwa njikwa na ngwaahịa anyị n'oge a na-arụ ọrụ anyị dum, maara nke ọma na ụlọ ọrụ anyị bụ ọkachamara na OEM na ngwaahịa anyị nabatara nke ọma n'ahịa n'ụlọ na mba ofesi. Nrụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị, anyị ga-ahụ ụwa na-enwu gbaa!
Nrụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị, anyị ga-ahụ ụwa na-enwu gbaa!
Wuxi CO-Lee Mbukota bụ otu n'ime ndị na-eduga iko, iko iko na ngwa ngwa na ngwa anya ụlọ ọrụ.
GlassTec - Nsogbu Ọhụrụ
Glasstec VIRTUAL site na 20 ruo 22 Ọktọba ejirila ihe ịga nke ọma gbochie ọdịiche dị n'etiti ugbu a na nke glasstec na-abịanụ na June 2021. Site n'echiche ya nke gụnyere ịnyefe ihe ọmụma dijitalụ, ohere ngosi ọhụụ maka ndị na-egosi ya yana nhọrọ ntanetị ndị ọzọ mejupụtara, ọ kwenyela ...
LOFT Eyewear egosi bụ Premiya onwe ha okomoko eyewear omume na-eme kwa afọ na New York City, Las Vegas na ugbu a San Francisco. Kemgbe afọ 2000, ihe omume LOFT egosipụtala ndị na-ekepụ iche na ndị na-egbusi ndị si n'akụkụ ụwa niile. Anyị bụ otu ndị otu ụdị obi, ndị nnwere onwe ha ...
China Europe International Trade Digital Ngosi ẹkenịmde ke Beijing
China Europe International Trade Digital Exhibition, nke China CCPIT kwadoro, China Chamber of International Commerce na China Service Trade Association jikọrọ ọnụ ọnụ, emere na Beijing na October 28 afọ a. Ihe ngosi a bu ka anyi na-echeta oge iri ise na ise nke dipoli-Sino-European ...
High Quality Mixed Colors naịlọn Kemeghi Gụọ ...
2020 Fashion Trendy okomoko Brand Metal Square R ...
Njikere Sgbọ mmiri Microfiber Suede Anti Fog Glasses ...